ထူးထူးခြားခြား ပင့်ကူများ | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Environment » ထူးထူးခြားခြား ပင့်ကူများ	30
Posted by မဟာရာဇာ အံစာတုံး on Jun 26, 2012 in Environment | 30 comments
mocho says: ရခိုင် ဘက်မှာနေ တုန်း က အကိုက် ခံရင် ၊ အခန့် မသင့် ရင် သေ နိုင်တဲ့ ၊ မသေတောင် အကိုက် ခံရတဲ့ နေရာ က အသားတွေ ပဲ့ ကျ သွားအောင် အဆိပ်ပြင်းတဲ့ ကြွေ ပင့် ကူ လို့ ခေါ်တဲ့ တောကြီး ပင့် ကူ တွေ တွေ့ ဖူးသလို၊အကိုက် ခံရတဲ့ လူနာတွေ လည်း တွေ့ ဖူးတယ်။ တချို့ဆို အချို ပန်းကန် ပြား အရွယ် လာက် ရှိတယ်။ အခု အကောင်လေးတွေ က ကြည့် ရတာ ကြောက် စရာမကောင်း ဘူး၊ အဆိပ်တော့ ရှိ မှာပဲ ထင်တယ်။
မောင်ပေ says: အသဲယားတာဗျာ ။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် မမြင်ဖူးတာလေးတွေ ကြည့်ရလို့ ရှဲရှဲ
water-melon says: Spiderman ဖြစ်စေတဲ့ ပင့်ကူမရှိဘူးလားဟင်
နာ့ဟဲ့ စဗတ်တာမန်း ဖရဲကွ
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: ရှိဒယ် …
အရောင်လေးက အနက်ရောင်လေး ..
တစ်ခါတည်း သေ .. အဲလေ ..
တစ်ခါတည်း စဗက်တာမန်း ဖစ်တွားရောဒဲ့ …
mayjuly says: ဟမလေးးး
ကြောက်ဒယ် .. :P
cum min says: ပြုံးနေတာ…နာလားလို…လန့်သွားတာ…ဂဲ….
ဘဲဥ says: အိမ်း အိမ်း ကောင်းပေစွ ကောင်းပေစွ
ဗဟုသုတ ရပေတာပေါ့ကွယ် :grin:
manawphyulay says: ယူထားတဲ့ မေဂျာကတော့ ဇူးမေဂျာပါပဲ။ ကျောင်းပြီးထဲက ဘာမှမသိတော့တာ။ ခုမှပဲ သေချာသိတော့တယ်။ ပင့်ကူတွေက ကျိုက်ထီးရိုးမှာဆိုရင် ဆေးမြစ်တွေနဲ့ ဒဏ်ကြေလိမ်းဆေးတောင် ထုတ်တယ်နော်။ ဒီကောင်တွေလည်း လိမ်းဆေးဖော်လို့ရတယ်မလား။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကြည့်ရတာ အသဲယားလိုက်တာအေ
mamanoyar says: မမြင်ဖူးတာတွေ မြင်ရတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်
may flowers says: ထူးထူးခြားခြားပင့်ကူများမို့ ဗဟုသုတအဖြစ်လေ့လာကြည့်ရှုသွားပါတယ်………ကိုအံဇာတုံးရေ။
ခပ်မိုက်မိုက် ကောင်မလေး says: ထူးဆန်းပါတယ်နော်…
Ma Ei says: အပင်မှာသစ်ကိုင်းခြောက်လေး မှတ်လို့ချိုးမလို့ ကိုင်မိတော့မှ
အကောင်လေးဖြစ်နေတဲ့ တုတ်ချောင်းကောင်လေး တွေ့ဖူးတယ်…
မိုး မင်းသား says: မဟာရာဇာရေ…….ပြူးကြောင်ကြောင်ပင့် ကူနဲ့ ပြုးံနေတဲ့ ပင့် ကူကို
ကျေးဇူးတင်မဆုံးပဲဗိူ့…….ကျေးကျေးပါခင်ဗျာ
စိန်ဗိုက်ဗိုက် says: ဟဲ့
နာ့လို နမူး ပင့်ကူတွေ့ ရင် သတင်းပို့ ပါ
ဇောက် ထိုး says: ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကြည့်ရတဲ့သူအတွက် အကျိုးမယုတ်ပါဘူး။
အားပေးရမှာပါပဲ။ ကျေးဇူးပါ ကိုရာဇာ။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 862
ရဲစည် says: ပနားမားမှာ ပင့်ကူဂဏာန်းနဲ့ ဂဏန်းပင့်ကူ မတူဘူးတဲ့
(က) ပင့်ကူ_ဂဏန်းက ဂဏန်းပုံစံ အကောင်က ၈” လက်မပတ်လည်လောက် ရှိတယ်
( ခ) ဂဏန်း_ပင့်ကူက ပင့်ကူပုံစံ ခြေချောင်း ၁ချောင်းစီကို ၂မီတာကနေ ၃မီတာလောက်ရှိတယ်တဲ့ တကောင်လုံး ပတ်လည်ဆို
၄.၅မီတာ ၁၃ပေကျော်လောက် ရှိတယ်ဆိုဘဲ ….
ပင့်ကူဂဏန်းကတော့ မြင်ဖူးတယ် ချစ်စရာလေး လူကိုလဲ အန္တရာယ်မပေးတတ်ဘူး စစကိုင်ခြင်း ညှပ်မှာကြောက်နေရသေးတယ်
marblecommet says: အဲပင့်ကူတွေကို
ဖိုးထောင် says: ဗဟုသုတတိုးပါတယ်
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2705
kyeemite says: မောင်အံဇာတုံး ပုံလေးတွေ
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: ကြည့်ရအောင် ပြထားတာကို
ဘာလုပ်ချင်လို့တုံး .. :D
ဒိုးစနစ် says: ပင့်ကူတွေကို စိတ်ဝင်စားတယ်..
ဒါပေမယ့် အသည်းယားပြီး ကြောက်တယ်..
ရှမ်းပြည်သား (တောင်ပိုင်း) says: ဦးလေးပင့်ကူတွေတော်တော်ဘောတော်ခွေ့ပုံပေါ်တယ်……
သားဦး၊မြေးဦး says: ကိုအံစာတုံးရေ ငှက်ချီးနဲ့ တူတဲ့ကောင်က ကြောက်စရာဗျာ။
Khaing Khaing says: ကိုတောက်တဲ့ ဟိုနေ့ကပို့စ်ကိုတွေ့တယ် မအားတော့မမန့်ဖြစ်ဘူး ……. အခုတော့ ကိုတောက်တဲ့ပို့စ်ကို မနည်းရှာပီး မန့်လိုက်တယ် ဒါက ကိုတောက်တဲ့ကိုသတိရနေသေးတယ်ဆိုတဲ့အထိန်းအမှတ်ပေ့ါ ……… ပင့်ကူတွေ မွေတွေဆိုစိတ်မ၀င်စားဘူး …… ဗဟုအနေနဲ့တော့ကြည့်သွားပါတယ် ……
မစ္စတာ တောက်တဲ့ says: သတိရသေးတယ်ဆိုလို့
ပြန်လည် ပြောပါရစေ ..
ရွာစားကျော် says: ထူးဆန်းပါပေ့ ဆရာတောက်ရေ
Phaung Phaung says: ပင့်ကူတွေကိုစုံနေတာပဲ။ တခါမှမမြင်ဘူးဖူး။ အောက်ဆုံးက ပြုံးနေတဲ့ပင့်ကူလေးကို အကြိုက်ဆုံးပဲ…။ ဂျယ်လီ လေးကြနေတာပဲ။ စားတောင်စားချင်တယ်…. အဟိ။
char too lan says: ပင့်ကူထက်တောက်တဲ့ကပိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်
မဂွတ် ထော် says: မမြင်ဘူးတာမြင် ရတာပေါ့ဗျာ
Comments By Post``ဒေဝေါကြီး လာမှာစိုးတယ်´´ - TNA -etoneငါ ရဲ့ ငါ မဟုတ်တဲ့ ကဗျာ - သူကလေး - Mobile13၄ လရှည်ကြာ ရွာထဲမှာ - Myo Thant - အလင်း ဆက်အိပ်မက်မင်းသမီး - Myo Thant - Kaung Kin Pyarလူစွန့်စားမြင့်ကျော်နှင့် ခေါင်းပြတ်နတ်ရုပ်တု (စ/ဆုံး) - kyeemite - ဦးကြောင်ကြီးအမျိုး ဘာသာ သာသနာကို စောင့်ရှောက်ကြမယ် ဆိုရင် ဖြင့် - nay khin - မိုချိုမောင်ပေ ရဲ့ ပုံတိုပတ်စများ - kyeemite - Myo Thantနားစွန် နားဖျား ရပ်ကွက်...။ - kyeemite - kyeemiteတောင်းပန်အပ်ပါသည်။ -etone - သူကလေးကျွန်ုပ်ရောက်ရှိခဲ့သော ကျတ်တို့ဌာနီ - kyeemite - Miss Crystallineကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲတွေက ရတဲ့ အတွေး - သူကလေး - Mr. MarGaComment မှာ လူစည်ချင်ရင် (ယတြာ) - Foreign Resident - မင်းမင်းမြေမျိုပျောက်ကွယ်ခြင်း - kyeemite - ဦးကြောင်ကြီးအတိတ်က ခြေရာတွေပြန်ကြည့်ရအောင် - ဦးကြောင်ကြီး - kyeemiteနံရိုးကြံမဆိုင် မြီးရှေ easy cook - Miss Crystalline - YUYA MONသူတို့ ရောက်လာကြတော့မည်၊ သတိသာ ထား - ဦးကြောင်ကြီး - မဟာရာဇာ အံစာတုံးသဂျီးနောက်ကနေ ဘယ်သူထိုး who? - မင်းမင်းရပ်ကွက်မှသည် နိုင်ငံဆီသို. - ရွှေတိုက်စိုး - kaiသို့ ချစ်သောဖေဖေ - Myo Thant - uncle gyiသမ္မတကြီး ဦးကြောင် အိမ်သာview - Miss Crystalline - မောင် ပေbin bo..........(ဘင်ဘို) - Aung Myat Lin - uncle gyiအထူးတလည် ကျေးဇူး တင်ရှိခြင်း - Foreign Resident - Mobile13ရထား ထွက်တော့ မယ် - Mobile13 - ရဲစည်(ခ)စောဖွပြေးအဟံ ပထမံ - padonmar - kaiCongress - ရာမည - ရာမညကျွန်တော့်စိတ်ဓာတ် - Silver Twig - လုံမလေးမွန်မွန်အိပ်ပျော်နေသူများ နှိုးရခက်သည် 。。。。。。。。。 - ရဲစည်(ခ)စောဖွပြေး - မဟာရာဇာ အံစာတုံးကျီးအာသီးနှင့်တူသော နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ - TNA - TNAPassport လျှောက်မယ်ဆိုရင် - uncle gyi - အရီးခင်လတ်East West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities